Yako Yekutarisa yeYakabudirira Tekinoroji Mutambo! | Martech Zone
Iyi vhiki yekupedzisira, takarova yekutanga Mumhanzi, Kushambadzira & Tech Midwest Chiitiko (#MTMW. Ichi ndicho chiitiko chekutanga chandakamboisa saka chaityisa. Nekudaro, yakaenda pasina chinorova uye ini ndoda kupa ruzivo kune vamwe kuti nei yakanga yakabudirira kudaro.
Takasarudza kuita a tekinoroji mutambo pane wepakati nepakati, musangano unofinha kuitira kuti vanhu vagone kusununguka uye vagarisane zvakanaka pane kufinhwa nekuchema neinotevera Powerpoint yakaipa. Vapindi vanogona kunge vaine imwechete panguva imwechete nevatsigiri kuti vaongorore zvipo zvavo… asi pasina hurukuro.
mutsa - zvisinei nezve chiitiko chako, unogona kuita mushe nekusimbisa imwe mari kubva muchiitiko ichi ichienda kune yakasarudzika rubatsiro. Kwedu, isu takapa 100% yemari inowanikwa kune Leukemia & Lymphoma nzanga. Isu takatove nevakapinda vakatanga zvavo nzira dzekutsvaga mari dzakasangana nedzedu! Ndatenda # run4doug
Sponsors - kuva nerupo kwakatigonesa kuenda kunotsvaga vatsigiri vemasaini, makadhi echipo, vashandi, chikafu, uye mimhanzi. Takashanda nevatsigiri kuti tione kuti tingachengeta sei mapakeji nemutengo wakaderera nekutengesa pamwe navo - uye zvakashanda!
vakatozodzokera - nzvimbo chaiyo yakakosha. Isu takasarudza iyo Rathskeller muIndiapolis - inonakidza yepakati yepakati pechikamu chakashama cheguta rine mukana kubva kwese kwese - yaive nebindu redoro, bhawa uye kamuri yebhora - ese aine masiteji uye kurira kwekumhanya mimhanzi. Vashandi vaivepo kuti vabudirire uye vakapfuura zvese zvaitarisirwa.
Public Relations - Dittoe PRakashanda asinganeti kwemwedzi kuti abatanidze neterevhizheni yemuno, redhiyo, mapepanhau uye nhepfenyuro dzepaInternet kusimudzira chiitiko. Chiitiko ichi chaive budiriro yakakura nekutenda kwavo!
Social Media - isu takatumira angangoita mazuva ese pane yedu saiti uye mune ese enhau midhiya nzira kuti varambe vachinyengedza vanhu kuti vauye. Isu takashambadzawo paFacebook neTwitter kufambisa ruzivo. Takashanda pamwe Saiti Maitiro, nyanzvi dzekutsvaga dzemunharaunda dzakasimudzira chiitiko ichi munharaunda uye pane yedu kushambadzira redhiyo show.
mumhanzi - Mumhanzi wakasiyana siyana… kubva kuBlues kuenda kuBluegrass uye Folk kuenda kuJazz yaivepo. Isu takatomhanya yakakwira-tsananguro chaiyo konzati mune yedu tekinoroji holo kubva Atmosphere.
Event Management - Steve Gerardi mushambadzi wechiitiko chemuno uye aiziva zvese zvaida zvakarongwa nekuitwa pasi kusvika kwese kwese. Iye akange asiri chinhu chipfupi chinoshamisa mukati mekuronga nekuitwa kwechiitiko.
Pamutemo Kunyoresa - Vakapinda vaigona kubhadhara online uye isu taive nevashanyi runyorwa pasuwo, pamwe neIpad kwavanogona kubhadhara nekiredhiti kadhi. Panzvimbo pematikiti, takagovera mavara-akanyorwa mawrist band uko vanotsigira, vakuru, vana uye mabhendi vese vaive neruvara rwavo rwekuzivikanwa zviri nyore.
Chiratidzo - Taida zvinhu zvekushambadzira, mepu, red carpet kumashure kwemapikicha, zvikwangwani uye mapepa ... uye zvakabatana nekambani inoshamisa. PERQ kuti zviitwe.
mibayiro - PERQ yakarongwa yavo FATWIN zvikwata pachiitiko apo munhu wese anenge aripo aigona kunyoresa uye kuhwina mibairo. Iyi yakawedzera tsoka traffic kune yedu tekinoroji horo uye vedu vaipinda vese vakaenda kumba nemubairo!
rira - Ini handikwanise kusimbisa kuti izwi raikosha sei Nechiyero chakaringana chemimhanzi uye nevanhu, munhu wese aive nekupururudza pachiitiko pasina kunyanyisa kurira. Vanhu vakakwanisa kuita hurukuro uye vachiri kunzwa inoshamisa tarenda iri kutamba kumashure. Imba yehunyanzvi yaive pasi notch kuitira kuti vanotsigira vawane kutarisisa. Pyramid Inonzwika Mabasa inotungamirwa na Mike Ottinger akatungamira ruzha uye zvaishamisa!
T-Shirts - Iyo Art Press yakagadzirirwa T-Shirt yekurangarira yemutambo uyo wakatengesa kunze (asi iwe unogona achiri kuaraira online pano kusvika Chivabvu 10). Vashandi vaive nema t-shirt ane VASHANDI akadhindwa kumashure. Iyo Art Press zvakare yakagadzira tafura yekutengesa iyo yakagamuchira makadhi echikwereti uye yakatovaka iyo online yekuodha saiti kuitira kuti vanhu vatenge shati gare gare!
Zvokudya & Imwai - kusiyanisa inoshamisa yeGerman menyu, isu takanyora zvakare kunoshamisa yemuno New York Pizzeria kumisa chikafu chavo chekudya pagedhi kuenda kuchiitiko. Nzvimbo mbiri idzi dzakati vakaita zvekutengesa zvakanakisa mukati mese… uye vanhu vazhinji vaive nenzara! Nepo chikamu chenzvimbo yacho chaive bhawa, isu taivewo neimba yebhora yaivapo kana vanhu vasina kugadzikana pakunwa.
Kuchaja Zviteshi - Wese munhu ane foni uye vese vanoda kubhadhariswa. Tinotenda isu, Powerqube vakaendesa pallet yavo inoshamisa smart charger uye munhu wese aikwanisa kutora mifananidzo uye kuigovana navo zuva rese! Mabhatiri akafa zvinoreva kuti hapana kugoverana !!!
Vhidhiyo uye Mifananidzo - takaunza iyo chakanakisa chiitiko mutorwa mifananidzo mudunhu, Paul D'Andrea. Uye takava naIsaka Daniel, an nyanzvi yevhidhiyo uyo ane hunyanzvi hwekutaura nyaya anouya nechikwata, muunganidzwa wemakamera uye GoPros, uye isina-mira simba. (Mavhidhiyo ari kurodha pasi uye akasanganiswa sezvandinonyora izvi).
Kunyange hazvo chaive chiitiko chakakura, ndinotenda takarasikirwa nezvinhu zvishoma:
Chirongwa - Iyo mini-chirongwa ingadai yakave yakanaka kugamuchira vanhu, ichipa akakosha ma link, tsananguro dzevanotsigira, uye chirongwa chavo!
Anotsigira Kushanya - Ini ndinofunga iyo Bingo-dhizaini kadhi apo vanhu vaifanira kuwana chitambi kubva kune mumwe nemumwe mutsigiri kuti vatambe FATWIN ingadai yakaendesa yakawanda traffic kune yega tekinoroji dumba.
Ingori katsamba - Ini ndakasarudzwa kune iyo Murume & Mukadzi wegore mushandirapamwe uye unogona batsira kuburikidza naMay 10th!
Tags: dorokuchaja zviteshimutsasaizvozvo prdrinkchiitikoChiitiko manejimendifacebook chiitikomutambomutambo wekuongororachikafumike ottingermumhanziprhukama hwevanhupiramidhi kurira kunoshandapasocial adskusimudzira munharaundariraSteve Gerardit-shirtt-shirtsNzvimbo